Puntland oo shaacisay go'aankeeda Ra'iisul Wasaaraha cusub ku aadan. - Caasimada Online
Home Warar Puntland oo shaacisay go’aankeeda Ra’iisul Wasaaraha cusub ku aadan.
Puntland oo shaacisay go’aankeeda Ra’iisul Wasaaraha cusub ku aadan.
Dowladda Puntland ee Soomaaliyeed ayaa soo dhoweysey magacaabista Raysal wasaaraha cusub ee DF Somalia Cabdi Faarax Shirdoon ”Saacid” oo habeenimadii xalay lagu dhawaaqey.
Hadaba akhristayaasha sharafta leh waxaan halka idiin ku soo gudbineynaa nuqul kamida bayaankii ka soo baxay dowladda Puntland ,waxana uu u qornaa sidatan:.
Dawladda Puntland ee Soomaalia waxay soo dhoweynaysaa magacaabista Raysal-wasaaraha cusub ee Soomaalia Mudane Cabdi Faarax Shirdoon.Waxay Dawladda Puntland hormuud ka ahayd nidaamka Federaalka ee Soomaaliya 1998 iyo 2004, waxayna sidoo kale kaalin muhiim ah ka qaadatay dhamaystirka geeddi-socodkii lagaga baxayey ku-meel-gaarnimada [Roadmap] iyo dhamaystirka Dastuurka federaalka ah.